RASMI: Juventus oo si rasmi ah u la soo wareegtay Douglas Costa – Gool FM
RASMI: Juventus oo si rasmi ah u la soo wareegtay Douglas Costa
(Juventus) 07 Juunyo 2018. Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay si toos ah kala soo wareegtay saxiixa xidiga xulka qaranka Brazil Douglas Costa, kooxda reer Germany ee Bayern Munich.
Douglas Costa ayaa u saxiixay kooxda reer Talyaani ee Juventus heshiis gaarsiisan ilaa iyo 2022.
Juventus ayaa war rasmi ah ay arintan ku shaacisay waxay ku sheegtay: “Hal sano kadib heshiiska amaahda ahaa ee kooxda Juventus wuxuu isku badalay mid rasmi ah ee gaarsiisan ilaa iyo 2022, kadib markii ay kooxda kansashay heshiiskiisa Bayern, sababa la xiriira hal ciyaareed cajiib ah uu kooxda ku qaatay”.
“Xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Italy, Costa ayaa soo bandhigay tayadiisa, wuxuu ahaa dhibta ugu weyn ee daafacyada, wuxuu ciyaaray inta badan kulamada Serie A xilli ciyaareedkii hore”.
“Wuxuu ahaa xidiga labaad ee ugu gool caawinta badan wuxuuna sameeyay 14 caawinaad, wuxuu sidoo kale ahaa mid ka mid ah xidigah ugu gool caawinta badan Talyaaniga ah heerarka oo dhan, wuxuuna sameeyay 60 fursadood, wuxuu dhaliyay 4 gool ee ah horyaalka iyo 2 gool ee ah Copa Italy”.
"Kulankasta ka hor Qur'aanka Kariimka ayuu aqristaa anigana sidoo kale."- Baro Maxamed Saalaxa Cusub
Real Madrid oo go'aansatay inay iska fasaxdo Cristiano Ronaldo